कम उमेरमै मनग्य पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ३ तरिका – Aarthik Samachar
कम उमेरमै मनग्य पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ३ तरिका
अहिले मिडियाहरुमा सेयर बजारको निकै चर्चा छ। तर मिडियाहरुमा आएकै खबरका भरमा सेयर बजारमा आफूले नबुझी लगानी गर्नु उचित हुँदैन। यदि तपाइँ सेयर बजारमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पहिले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुहोस् र जानकारी प्राप्ति गर्नुहोस्। सेयर बजार होस् वा अन्य व्यापार सबै क्षेत्रमा आफूले सोचरविचार गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ। तर अध्ययन अनुसन्धान गरेर गरिएको लगानीबाट तपाइँले मनग्य कमाउन सक्नुहुन्छ।